Tombony sy fatiantoka ny chandelier sy ny jiro valindrihana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-04-22
Amin'ny dingan'ny haingon-trano, ny safidin'ny jiro dia rohy tena lehibe. Amin'ny tsenan'ny haingon-trano ankehitriny, ny jiro mahazatra dia azo zaraina amin'ny karazany roa: jiro sy jiro valindrihana. Ireo karazana jiro roa ireo dia samy manana ny mampiavaka azy ireo, izay mahatonga ny olona maro hahatsapa ihany koa ...
Ahoana ny fomba hisafidianana chandelier
Ny chandelier dia matetika ampiasaina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fisakafoanana na efitrano fatoriana ao an-trano. Ny chandelier dia miravaka fatratra, fa inona ny karazana chandelier ao? Ahoana ny fomba hisafidianana chandelier? Ahoana ny fametrahana ny chandelier? Manaraka, ampahafantaro ahy izany. Karazana chandelier 01 Ireo chandelier feno nautika ...
Ny fiantraikan'ny mari-pana loko isan-karazany amin'ny fihetsem-pon'ny olombelona
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-16
Ny hafanan'ny lokon'ny fahasamihafana dia hamorona atmosfera samihafa. Ohatra, ny loko mafana dia afaka mamorona atmosfera mafana, tantaram-pitiavana ary ahazoana aina, fa ny loko mangatsiatsiaka kosa dia hiseho mangatsiaka sy aolo ilay sary. Ny mari-pana loko isan-karazany dia aseho etsy ambany: zarainay amin'ny ankapobeny ny loko ...
Inona ny haben'ny jiro rindrina napetraka eo amin'ny lohan'ny fandriana 2 metatra?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-02-26
1. Ny jiro amin'ny rindrin'ny fandriana dia tokony ho 1.5 ka hatramin'ny 1.8m miala amin'ny tany hatrany ambany. Raha mivoaka ny jiro amin'ny rindrina amin'ny rindrina dia tokony ho 10cm ka hatramin'ny 40cm ny elanelana misy eo amin'ny rindrina sy ny jiro eo am-pandriana. Raha 45 cm ny haavon'ny fandriana, ampiana ny haavon'ny kidoro mahazatra rea ​​...
Ahoana ny fomba handravahana trano amin'ny lalantsara Maizina ny toerana, tsy voafantina ireo jiro, karazana fampifangaroana dimy dia mafana sy mamiratra
Raha tsy manana jiro ampy ny lalantsara dia hiseho manjavozavo tanteraka ny habaka. Raha mandeha toy izao ny zava-drehetra dia hanome fahatsapana fahaketrahana sy tahotra amin'ny olona izany. Avy eo ahoana ny fanaingoana trano amin'ny lalantsara? Manoloana ny lalantsara tsy misy jiro, karazana jiro dimy no asaina manao spa ...
Inventory chandelier efitra fandraisam-bahiny dimy, iza amin'ireo no heverinao fa mety indrindra amin'ny tranonao
avy amin'ny admin tamin'ny 21-01-19
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia ampahany manan-danja indrindra amin'ny rafitry ny fianakaviana. Toerana fialamboly sy fialamboly fotsiny izy io ary io ihany koa no toerana lehibe hampiantranoana ny vahiny. Ny haingon-trano tsara dia afaka mamela fahatsapana tena tsara ho an'ireo vahiny, ary hahatonga ny olona hidera azy ireo, mieritreritra fa raha manana ...
Ilaina ve ny mividy jiro gorodona? Mbola mametraka an'io fanontaniana io ianao
Mpinamana maro no mety mianatra momba ny jiro amin'ny gorodona amin'ny fahitalavitra, izay matetika no hita tao amin'ny fianakaviana manankarena tamin'ny taona 60 sy 70. Na izany aza, ny jiro maoderina mazàna dia misy bracket, lampozia ary loharanom-pahazavana, mitazona toerana iray ary efa lany andro, ka olona maro no tsy hisafidy izany. Raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao, ...
Misy mahasamihafa ny chandelier sy ny tsy misy chandelier, tena lehibe ny fanovana!
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-12
Efa mandroso ny fotoana, ary mivoaka hafa ihany koa ny jiro sy ny jiro. Na dia fomba mahazatra aza ny chandelier, miaraka amin'ny aingam-panahin'ny endrika bebe kokoa, ny famolavolana jiro tsy misy lehibe no lasa haingo lehibe indrindra! Androany, andao hiresaka ny mahasamihafa ny chandelier sy ny c ...
Tsy fantatrao izay jiro gorodona hisafidianana? Afaka misafidy toy izao
Miaraka amin'ny famolavolana ny fanaka an-trano tsotra, ny karazana sy ny endrik'ireo jiro amin'ny gorodona dia niha-maro isan-karazany, ary ny fiasan'izy ireo koa dia nisy fanavaozana maro. Amin'ny lafiny famolavolana, ny jiro gorodona dia an'ny endriny Nordic, miaraka amina endrika kely indrindra ary famolavolana miolaka; ...
Ny chandelier lehibe dia efa lany andro, ary ny famolavolana jiro lehibe dia malaza ankehitriny, izay mandroso!
Mbola tadidiko ny haingon-trano taona vitsivitsy lasa izay, ny jiro ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia chandelier na jiro valin-drihana avokoa, fa ho hitanao ao anaty haingo izao. Betsaka ny olona no nahafoy ny jiro lehibe ary tsy nisy fahazavana lehibe lasa fironana. 1. Inona avy ireo toetra mampiavaka ny tsy lig lehibe ...
Aza mametraka chandelier lehibe, malaza ireo jiro ireo amin'ity taona ity! Tongava mijery ~
1. Jiro valin-drihana Ny jiro valin-drihana dia mitovitovy kely amin'ilay chandelier, saingy tsy misy fizotra mihantona, noho izany dia toa tsotra sy mahitsy kokoa izy io. Toy izao manokana dia mety tsara amin'ny fomba fanaingoana Japoney, Nordic ary tsotra. 2. Downlight Downlight dia matetika ampiasaina amin'ny fialamboly isan-karazany ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-23
Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny jiro sentrik'olombelona, ​​Andriamatoa Andreas Schulz dia mizara aminay tetik'asa fanaovan-jiro marobe ary nanaporofo fa ny jiro maha-olona dia na aiza na aiza, ary mitondra ny fitaomana lehibe amin'ny fihetsem-po amin'ny alàlan'ny hazavana. Amin'ny maha mpanamboatra jiro sy mpanondrana traikefa manankarena anay dia ...
Ny jiro haingon-trano dia manana fahalalahana lehibe amin'ny famolavolana. Tsy toy ny jiro ara-barotra, izay manana fikatsahana teknika farany kalitao optika, ny famolavolana jiro haingon-trano dia manasongadina tsy ny hatsaran-tarehin'ny jiro ihany, fa koa ny haben'ny vokarin'ny hazavana. Amin'ny fampiharana samihafa ...
Ahoana ny fomba hisafidianana chandelier? Ahoana no tokony hataon'ny mpamorona endrika amin'ny tompony?
Ny chandelier dia jiro fanaingoana malaza izay apetraka amin'ny valindrihana amin'ny habaka anatiny, dia malaza amin'ny habaka anatiny sy avo lenta (trano fandraisam-bahiny, efitrano fanaovana fanasana lehibe, sns.) Sy toerana an-trano noho ny hazavana malefaka sy ny haingon-trano matanjaka. Ny fanentanana tsy misy jiro lehibe mandritra ny taona maro dia ...